HR များအတွက်မွန်ဘိုင်းဂျော့ဘ် - အစိုးရ - ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် IT အိန္ဒိယတွင်များကိုဖွင့်
ဒူဘိုင်း Mall ကယောဘ - ယူအေအီးအတွက်ထိပ်တန်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘို့ Apply!
သြဂုတ်လ 7, 2018
သူတို့ကိုရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုမွန်ဘိုင်းဂျော့ ?. အမှန်တကယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအိန္ဒိယကနေအလုပ်ရှာဖွေသူများအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုစိတ်ထဲထားပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးသူတို့ကိုကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များထားရှိပေးသည်။ တိုတိုပြောရရင် အလုပ်အကိုင်ရဖို့ဘယ်လောက် မွန်ဘိုင်းဧရိယာထဲမှာ။ ငါတို့သည်လည်းဒူဘိုင်းမှမွန်ဘိုင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ စိတ်၌ဤအတူကျနော်တို့အလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေမျှော်လင့်နေကြသည်။ ထိုအနေသမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပေးချက်များကိုအသုံးပြုပြီးအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ ကျိန်းသေ, မွန်ဘိုင်းဧရိယာများတွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအာရုံစိုက်ကြောင့်မွန်ဘိုင်းဂျော့ရလိမ့်မည်။ ထိုအခါနေရာလွတ်အမျိုးအစားအကြားခြားနားချက်။ အကောင်းဆုံးကိုအိန္ဒိယနှင့်သင်၏အသေးစိတျမှတ်ပုံတင်မည် အလုပ်အကိုင်အက်ဘ်ဆိုက်များ။ နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း start ဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ join ဖို့အိန္ဒိယကနေလူတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေကြသည် အသစ်က updated အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှု.
ရှိသည် ပညာတတ်အမှုဆောင်အရာရှိတွေအများကြီး။ စိတ်၌ဤအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းစတင်အများအပြားအချက်များနှင့်ဆောင်းပါးများကိုတင်လိုက်တယ်။ ဥပမာ အလုပ်အကိုင်အဆိုဒ်များတစ်ဦးပြည့်စုံစာရင်း မွမ်ဘိုင်းတွင်။ အဖြစ်မွန်ဘိုင်းကနေအလုပ်ရှာဖွေသူများများအတွက်အကြံပြုချက်များ။ ထို့အပြင်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောအလုပ်အကိုင်များအိန္ဒိယတွင်ကိုဆက်ကပ်။ Are အကြီးမားဆုံးမြို့ကြီးများအတွက်ယခုရရှိနိုင် ထိုကဲ့သို့သောမွန်ဘိုင်းအဖြစ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းမျှော်လင့်သင်သည်အလုံအလောက်အသိပညာပေးခြင်းဤဆောင်းပါးကိုအားမရအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ ရုံ သငျသညျအလုပ်လုပ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြသ မွမ်ဘိုင်းတွင်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကြီးမားတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ အိန္ဒိယတွင်အမှုဆောင်အရာရှိမွန်ဘိုင်းအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုဖြစ်စေသည်။ ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်သင်သည်ပညာပေးဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
ယခုကြှနျုပျတို့များမှာ အိန္ဒိယကနေအများအပြားကုမ္ပဏီများမှရှိခြင်း။ ငါတို့သည်အိန္ဒိယအလုပ်ဈေးကွက်သို့ရွေ့လျားဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်မွမ်ဘိုင်းကနေကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုလက်ခံရရှိရန်ရှာဖွေနေသည်။ နှင့်ဤဧရိယာထဲမှာအခြေခံသူတွေကို။ သေချာလုပ်နိုင်တဲ့များအတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အရ။ အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေ၏ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှု ကုမ္ပဏီထိပ်တန်းအိန္ဒိယတွင် rated ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သေချာဘို့အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများချင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများ။ ကျနော်တို့အိန္ဒိယတွင်စုဆောင်းမှုစီမံကိန်းများမစတင်ကတည်းက။ ကျွန်ုပ်တို့၏ HR အဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာမွန်ဘိုင်းဧရိယာများအတွက်အဓိကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငှားရမ်းအေဂျင်စီဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး 20 နှစ်ပေါင်းကတည်းကမွန်ဘိုင်းမြို့လိုမြို့ကြီးပြ။ အလွန်ဖြစ်လာ စီမံခန့်ခွဲမှုအမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်ရေပန်းစားဦးတည်ရာ။ အများကြီးသောကြောင့် ဥရောပ နှင့်ယူအေအီးကုမ္ပဏီများစီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှိပါတယ်။ သူတို့အခွအေနမြေိုးကျနော်တို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးအားမရနေကြသည်။ ကျနော်တို့ကြိုးစားနေကြပါတယ် HR စီမံခန့်ခွဲမှုကိုချိုးဖျက်ဖို့ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီသို့။ နှင့်ကျိန်းသေ အိန္ဒိယကမ္ဘာ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြို့၏မြို့တော်။ အတော်လေးလူကြိုက်များဖြစ်လာသည်။ ထို့အပြင်ဦးဆောင်ကော်ပိုရေးရှင်း။ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူတိုးပွားလာလူကြိုက်များမှဦးဆောင်။ အထူးသဖြင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှ။
ပစ္စုပ္ပန်ကြိမ်အထိဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ။ အိန္ဒိယကနေအလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေသူကူညီပေးခြင်း။ ငါတို့သည်ဖြစ်ကြ၏ သင်၏ CV ကိုစောင့်ဆိုင်း။ ရိုးရှင်းစွာအသစ်ကိုအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ ကြှနျုပျတို့၏ website မှ CV ကို upload တင်လို့ရပါတယ်။ နှင့်မွန်ဘိုင်းအသစ်အလုပ်အကိုင်များများအတွက်ချောင်းမြောင်း။ မွန်ဘိုင်းမြို့ဖြစ်၏ ခြောအလုပ်အတွက်ထိပ်ဆုံး။ အလုပ်အဘို့ဤစိတျထဲတှငျ, အင်ဒီးယန်းအရှိဆုံးနာမည်ကျော်မြို့နှင့်အတူ။ ဤမြို့သည်ကြီးမားသောလူဦးရေရှိတယ်။ ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ကျနော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအသစ်သောအလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ်ရှိလူများအားမရနေကြတယ်။ ဤမြို့၌အလုပ်သာကောင်းလှ၏။ ဒါကြောင့်ဒေသခံတွေအဘို့အတက်ကြွလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ အတိတ်ကာလကျော်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကမွန်ဘိုင်းတဆယ်ကျော်ထောင်ပေါင်းများစွာအလုပ်ရှာဖွေသူများတင်လိုက်တယ်။
အများဆုံးကျွမ်းကျင်သူများအကြီးဆုံးမြို့ကြီးတွေမှာအလုပ်ရှာပါ။ ထိုအခါအများဆုံးဆွဲဆောင်မြို့မွန်ဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဤမြို့ကိုနေရာလွတ်များမတူကွဲပြားမှု IST ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးဘဝကိုအတော်လေးကောင်းတဲ့နှင့်မြင့်မားသောအဆင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့။ တစ်ဦးအနေဖြင့် အဆိုပါစီးတီး၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့အလုပ်အကိုင်ရဖို့ရန်။ သငျသညျအမြိုးမြိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၏လူတို့နှင့်အတူစကားပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မြင့်မားသောလူမှုရေးအဆင့်အတန်းနှင့်ဝသကဲ့သို့ကောင်းစွာအတူဘဏ္ဍာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသိပညာ။ ဤသည်အလိုတော်ကို ကျိန်းသေသငျသညျသငျ့လျြောသော HR မန်နေဂျာများရောက်ရှိရန်ကူညီ.
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်မှာအလုပ်လုပ်နေ။ အချို့ကိစ္စကျနော်တို့ခရီးသွားကူညီနေကြပါတယ်။ နှင့် အလုပ်ရှာဖွေသူများနှင့်အတူ coexisting။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအင်ဒီးယန်းများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးနီးပါးတဦးတည်းကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီမှာဖြစ်ကြောင်း ကမ်ဘာပျေါမှာထိပ်တန်းမြို့ကြီးများအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ အလုပ်ရှာဖွေသူများအမျိုးမျိုးအတူလုပ်ကိုင်။ လတ်ဆတ်တဲ့ မှစ. အကြီးတန်းမန်နေဂျာမှတက်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ သင်ဘယ်လောက်ဘာသာရေးသည်ငါတို့အဘို့အဘယ်သူမျှမကိစ္စရှိပါသည်။ ဒါမှမဟုတ်ဘာအတွေ့အကြုံကိုသင်ကမွန်ဘိုင်း၌သင်တို့၏အတွေ့အကြုံကိုအတွက်မီးမောင်းထိုးပြကြပြီ။ ကျနော်တို့နီးပါးမည်သည့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူနေရာအဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
ရှိပါတယ် ကျနော်တို့ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်ကြောင်းနေရာလွတ်တွေအများကြီး။ အထူးသဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်မန်နေဂျာဘို့။ အဖြစ်အိုင်တီနှင့်စျေးကွက်အမှုဆောင်အရာရှိ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသင်တို့အဘို့မွန်ဘိုင်းတစ်ဦးအသက်တာသစ်ကိုလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲ။ ကျွန်တော်တို့၏ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူလည်းအလုပ်လုပ်အသင်း။ ထိုအခါသူတို့ကိုအများကြီးသစ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းညွန်ထွက်ခြေလှမ်းရန်, မျှော်လင့်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူကျနော်တို့ကသူတို့နှစျသိမျ့ဇုန်အတွင်းကသူတို့ကိုအားမရနေကြသည်။ နှင့်ကျိန်းသေ, သူတို့ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟု အသစ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအောင်မြင်မှုများတွေ့ကြုံခံစား.
နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်အိန္ဒိယတွင်အခြေခံကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းသစ်အခန်းကဏ္ဍ၌သင်တို့ကိုနေရာချ။ အသစ်အဆင့်ကိုအတွင်းမှာပဲ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှု။ ထိုအခါသင်သည်မွန်ဘိုင်းနှင့်အတူရှေ့သို့ရွှေ့မည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုကို။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HR အဖွဲ့ကကျိန်းသေတစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအတှေ့အကွုံကတိပေးထားတယ်။ နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အမွန်ဘိုင်းချမှတ်ခံရဖို့ဘယ်တော့မှကြောင်းဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့ No.1 စာရင်းကိုင်အလုပ်
အကောင့်တစ်ခုအလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ်နေ့တိုင်းစီမံခန့်ခွဲရန်အကြိမ်ကြိမ်တာဝန်များကိုရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ထောက်ပံ့ ဘဏ္ဍာရေးသတင်းအချက်အလက်။ အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကသည် စီမံခန့်ခွဲမှု။ တစ်စူပါအသေးစိတ်လမ်း၌ပြစ်မှားမိပါလိမ့်မည်ထို့အပြင်အခါ။ အဆိုပါစာရင်းကိုင်အစီရင်ခံစာများအဘို့အသုတေသနပြုရမည်။ ပြီးတော့စာရင်းကိုင် data တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာ။ ထိုအမှာအလွန်အစီရင်ခံစာများပြင်ဆင်နေအဆုံးသတ်နှင့်အီးမေးလ်ကကျော်ပေးပို့ပါ။ ဒါကအလုပ်စီမံခန့်ခွဲဖို့အတော်လေးခဲယဉ်းသည်။ ဤနေရာတွင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းတာဝန်ယူမှုကိုပြုစုခြင်းဖြစ်သည်သေချာအောင်။ ထိုမှတပါး, ပြုစုနှင့်ဘဏ္ဍာရေးသတင်းအချက်အလက်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာ။ နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ။ သင်သေချာအောင်ရန်လိုအပ်ပါတယ် ဘဏ္ဍာရေးအရောင်းအများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုအမြဲမှန်ကန်သောဖြစ်ကြသည်။
ထိုအနှစ်ပတ်တအပတ်တိုင်းအဖြစ်။ အဆိုပါ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ လက်ရှိဘဏ္ဍာရေး status ကိုအနှစ်ချုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးမှာ ကျော်ကိုစေလွှတ်ထားပြီးကြောင်းနှောင့်နှေးစုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်မပါဘဲ။ နီးပါးပွဲချင်းပြီးစိတ်ထဲ၌ဤတစ်ချိန်ခွင်လျှာစာရွက်ပြင်ဆင်နေအတူ။ နှင့် ဤအလုပ်အကိုင်များ၏အဆိုးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကမှားနိုင်ပါတယ်ဘယ်တော့မှကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းစွာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမြတ်နဲ့အရှုံးကြေညာချက်၏။ သူတို့ကမှားနိုင်ပါတယ်ဘူး။ ထိုအသေချာသည်အခြားအစီရင်ခံစာများအဘို့အညီအမျှဖန်တီးနေကြသည်။
မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့ No.2 သို့ပြန်သွားရန်ရုံးအလုပ်အကိုင်များ
နောက်ကျောရုံးအလုပ်အကိုင်များအလုပ်အကိုင်အခြားအမျိုးအစားများမှာ။ ဒါကြောင့်, သင်တစ်စုံတစ်ဦးမှပြောဆိုရန်ရှာကြသည်လျှင်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏ဒီ type အကြောင်း။ သငျသညျအများကြီးအတွေ့အကြုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှုဆောင်အရာရှိနှင့်အတူစကားပြောသင့်ပါတယ်။ အိမ်ရှေ့ရုံးမန်နေဂျာများအတွက်ဥပမာ။ သူတို့ငှါကြောင့်, သင်တို့အဘို့အနည်းငယ်ကိုအကြံပေးချက်များရှိ။ တစ်ဦးကလူကြိုက်အများဆုံးတဦးတည်းဒေတာ entry ကိုအနေအထားနှင့်အတူ admin ရဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အစစ်ဆင်ရေးအဖြစ်ရှေ့ရုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပိုလတ်ဆတ်များအတွက်နေရာအများကြီးလည်းရှိပါတယ် နောက်ကျောရုံးစစ်ဆင်ရေးမှာဧညျ့ကွိုနှင့်ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုညှိနှိုင်းအဖြစ်။
မွန်ဘိုင်းမြို့အတွက်နောက်ကျောရုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အကကြီးမားကော်ပိုရေးရှင်း၏ဒေသများ၏ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါကအနုတ်ဘက်မှာ, အလုပ်၏ဤကြင်နာဝင်ငွေ generate မထားဘူး။ လမျး၌ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း၌ဤကိုမြင်လျှင်။ နှင့်ဤအနေအထားကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေသို့မဟုတ်အကြီးတန်းမန်နေဂျာများအတွက်မမြင်နိုင်သည်။ သို့သော်ငြားလည်း, အလွန်အရေးကြီးပါသည်ထောက်ခံမှုနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးများကို။ အထူးသဖြင့်အကြီးတန်းရုံးအုပ်ချုပ်ရေးသည်။ မွမ်ဘိုင်းရှိအပြန်ရုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအများအပြားအခန်းကဏ္ဍရှိပေလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနိုင် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်တူဌာနများအတွက်အလုပ်။ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများ။ အဖြစ် HR, စာရင်းကိုင်နှင့်လိုက်နာမှု။
မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့ No.3 ဘဏ်အလုပ်အကိုင်များ
မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ကျိန်းသေဖြစ်နိုင် အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများအဘို့ဖြစ်နိုင်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အောက်တွင်ထိပ်တန်း 10 ဘဏ်များတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သင်ပြောင်းလဲနေသောဘဏ်နှင့်အတူစတင်သင့်ပါတယ်။ သို့သော်ငြားလည်း, သင့်လုပ်ငန်းခွင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အနေနဲ့စိတ်အားထက်သန်အဖွဲ့သည်ဖွံ့ဖြိုးရမယ်။ နှင့်အိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အကြီးမားတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ အိန္ဒိယဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပဏီတွေဟာနိုင်ငံတကာငှားရမ်းနေကြလို့ပဲ။ ဒီတော့နေသမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ် သင်တစ်ဦးဝန်ထမ်းဖြစ်လာ။ အဆိုပါဘဏ်ဖြစ်နိုင်သည်ဒူဘိုင်းတစ်ခုကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်သင်ပို့နိုင်ဘူး။ သို့မဟုတ်ပင်ယူနိုက်တက်အမေရိကပြည်ထောင်စုနှင့်ကနေဒါမှ။ သို့သော်ငြားလည်း, အိန္ဒိယပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်သားများ။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင်များဘို့ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုပြီးမြောက်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြပါတယ်။ နှင့်သင်တန်း၏, အလုပ်အကိုင်အစတင်ရန် နှင့် ကမ္ဘာ့အတန်းအစားအိန္ဒိယဘဏ်များ.
ဘဏ်လုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေးအခေါ်ခိုင်မာတဲ့တန်ဖိုးများအပေါ်အမြဲအခြေခံသည်။ မှတစ်ခုဖြစ်သော ဥပမာစစ်ဆင်ရေးထူးချွန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမှတပါး, လက်ဝါးကပ်တိုင်ရောင်းအားနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောဖောက်သည်အာရုံစိုက်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, လူများတို့သည်ဘဏ်လုပ်ငန်းထုတ်ကုန်အပြုသဘောနှစ်ဖက်ဖေါ်ပြခြင်း။ ထိုအသေချာများအတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ရေရှည်တည်တံ့ရေးနှင့်ဝသကဲ့သို့ကောင်းစွာလူတွေတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်နေ့စဉ်တာဝန်စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ, ဒီအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ကြ၏ သငျသညျငှားရမ်းထားရကူညီပေးနေကတိသစ္စာပြု။ နှင့်ဤစိတ်တွင်, သင့်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးဆဲအတူ။ ထို့ပြင်အိန္ဒိယဘဏ်လုပ်ငန်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးကလူလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်ထိန်းထား။ မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များအောက်တွင်ကြည့်ပါ။
ထိပ်တန်း 10 ဘဏ်အလုပ်ရှာဖွေရေး Website များ:
ICICI ဘဏ်၏ Careers
မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့ No.4 ဖို့ဒေတာ entry ကိုအလုပ်အကိုင်များ
ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အဒေတာ entry ကိုအလုပ်အကိုင်များ, အင်ဒီးယန်းများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်နိုင်ခြေ၏အခြားအမျိုးအစား။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းအလုပ်အကိုင်ဤအမျိုးအစားကဆက်ပြောသည်။ တစ်ဦးကဒေတာ entry ကိုအနေအထားကိုယေဘုယျအားဖြင့်ကုမ္ပဏီရဲ့အထဲမှာအလုပ်န်ထမ်းများ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးစကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေါ့, ဒါကြောင့်အစမှာအတော်လေးပျင်းစရာအလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ အဓိကတာဝန်ဟာကွန်ပျူတာစနစ်ထဲကို data တွေကိုရိုက်ထည့်ဒါမှမဟုတ် update လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါသေချာအောင် က updated နှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်နေရာချနေပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်မန်နေဂျာအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေး data တွေကိုစကားပြော။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်ကွန်ပျူတာသို့ ဝင်. ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအ 90% အတွက်စက္ကူစာရွက်စာတမ်းများထဲကနေလာမယ့်။ အဖြစ်အီးမေးလ်များနှင့်ပျဉ်ပြားပေါ်တွင်အစီရင်ခံစာများ။ ဒါကြောင့်, ဒီနိမ့်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများအတွက်စုံလင်သောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်ယာယီန်ထမ်းတစ်ဦးကိုနေ့စဉ်တာဝန်အဖြစ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့်အလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက် အဆိုပါအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏စပေါ်တဦးတည်း။ ဒေတာ entry ကိုအလုပ်အကိုင်များနှင့်အတူအခြေခံရပ်တည်ချက်မှာစတင်နေသည်။ ထိုအခါနေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်တဲ့ကီးဘုတ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, ဒေတာအသံဖမျးနေရာအသုံးပြုရမည်သော optical scanner ကိုလည်းမရှိ။ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေအများကြီးယူပြီးပထမခြောက်လမှာအနေအထားကို။ ထိုအဘို့သေချာသစ်ကိုလောလောလတ်လတ်ဘွဲ့ရကျောင်းသားများကိုဒီအနေအထားအတော်လေးပျင်းစရာရှာတွေ့နေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အမြဲအိန္ဒိယတွင်သစ်ကိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အကြံပေး။ ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်သာလောလောလတ်လတ်ဘွဲ့ရကျောင်းသားများအတွက်ဆက်ပြောသည်ရပါမည်။ ကောင်းသောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူလူတွေအဲဒါကိုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အတော်လေးခဲယဉ်းသည်ဟုပြောစေခြင်းငှါကြောင့်ဖြစ်သည်။ နှင့်တာဝန်ကြောင့်အနိမ့်သည်မဟုတ်။ အရာအားလုံးအဖြစ် ကောင်းသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံမှာတက်သည်သတ်မှတ်ရပါမည်။
မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့ No.5 အစိုးရအလုပ်အကိုင်များ
အရေအတွက်ကငါးမှာ, ငါတို့မွန်ဘိုင်း Gov အလုပ်အကိုင်များရှိခြင်းနေကြသည်။ အလုပ်အကိုင်အဒီမျိုး အများအားဖြင့်အတွေ့အကြုံရှိအမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, နောက်ဆုံးပေါ်ရှာဖွေတာ မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရအလုပ်အကိုင်များ။ စိတ်ပျက်စရာကောင်းသောအလုပ်များဖြစ်နိုင်သည်။ အပြုသဘောဘက်တွင်၊ 10th pass / 12th pass grade အတွက်အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များရှိသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများရေရှည်အခွင့်အလမ်းများအတွက်ကောင်းသောများမှာ။ ရလဒ်အတိုင်း, အိုင်တီ-Software များအထူးကုရေရှည်စာချုပ်များအဘို့လိုအပ်ပါသည်။ အိန္ဒိယ အစိုးရအင်ဂျင်နီယာအဖြစ်အလုပ်နေရာလွတ်ရာပူဇော်သက္ကာကို အဖြစ်သံတမန်အမှုဆောင်အရာရှိ။ ဒါကြောင့်အဲဒီအခြေအနေတွေအောက်မှာ, အလုပ်ရှာဖွေသူများအစိုးရအမျိုးအစားအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုကနေရွေးချယ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီက်ဘ်ဆိုက်မှာလည်းအစိုးရကိုယ်စားလှယ်များအလုပ်အကိုင်များစာမျက်နှာများအကြောင်းကိုရေးသားခြင်း။ စိတ်၌ဤအတူကျနော်တို့မွန်ဘိုင်းကနေအားလုံးအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့တယောက်လမ်းညွှန်ရှိခြင်းမျှော်လင့်နေကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် All-အချိန်နှင့်အမျှစကားပြော, အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည်ငါတို့အသင်းစုရုံးအရင်းအမြစ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလုပ်အကိုင်ဒီလိုမျိုးရှာဖွေနေ။ အဆိုပါကဲ့သို့ရှည်လျားသော ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ် site ကိုသုံးပြီးလူတွေကို။ ကျိန်းသေမွန်ဘိုင်းအတွက်အစိုးရအလုပ်အကိုင်များနှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်များ၏တန်ဖိုးရှိသောအရင်းအမြစ်ကိုရှာပါ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ငါတို့သည်လည်းအလုပ်ရှာဖွေနေသူနေရာချထားဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ အစိုးရကဏ္ဍအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း Maharashtra ပြည်နယ်သစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်။ အဲဒီမှာကြီးမားတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။ ဗဟိုအစိုးရအလုပ်အကိုင်များဥပမာ, UPSC နှင့် SSC ရှင်းမှကြီးထွားလာလျက်ရှိသည်။ နယူး အခွင့်အလမ်းများကိုကြီးထွားလာနေကြတယ် နေ့တိုင်း။ ထိုအ KPSC နှင့် MPPSC နှင့်အတူနောက်ခံပြည်နယ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များစောင့်ရှောက်သူများဖြစ်သည်။ နှစ်ဦးစလုံး Are အိန္ဒိယတွင်ပိုလတ်ဆတ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်ငှားရမ်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေ.
ကျွန်တော်တို့ဟာစံအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုယူလျှင်ကောင်းပြီ။ အစိုးရကအလုပ်အကိုင်အဆိုအမှတ်မှာရဖို့ကျိုးနပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ် site ကိုစုဆောင်းမှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်လူသစ်စုဆောင်းရေးအစိုးရအလုပ်များအတွက်အထူးရပ်တန့်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းရှိစက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးနှင့်ကဏ္ across အသီးသီးတွင်ရှိသည် ဒီတော့အကောင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးပေးဆပ်မှုကိုရှာပါ မွန်ဘိုင်းရှိအစိုးရအလုပ်များ။ ကျိန်းသေအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်, ဒါကြောင့်စီမံခန့်ခွဲရန်ထိုက်သည်။ အသစ်ကအလုပ်အကိုင်ကတည်းကကစတင်ပါလိမ့်မည်။ အစိုးရကအဖှဲ့အစညျးတစျခုအတှငျးရှိ။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး status ကိုစတင်ခဲ့သည် ထမြောက်ဖို့နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအဆင့်အထိကြီးထွားပါလိမ့်မယ်.
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်ရရှိနိုင်အများအပြားမွန်ဘိုင်းအစိုးရအလုပ်အခွင့်အလမ်းများရှိပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် ကွဲပြားခြားနားသောပညာရေးနောက်ခံလူတွေအလုပ်အကိုင်ရရှိရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ တောင်မှအိန္ဒိယကြည်းတပ်သို့မဟုတ်ကန်ထရိုက်တာကုမ္ပဏီတွေကတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုဒီလိုမျိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ အပြုသဘောဘက်တွင်နောက်တဖန်ဤအစိုးရအလုပ်အကိုင်များ၏အဓိက positive ကြီးမားဖြစ်ကြသည်။ ၏ဥပမာအားဖြင့်, တွေအများကြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အမြင့်မားသောလစာပေးချေမှုထည့်သွင်းရန်ကမ်းလှမ်း။ အမြဲတမ်းအချိန်ပေါ်မဆိုအမှတ်မှာအဘယ်သူမျှမနှောင့်နှေးနှင့်အတူ။ စာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့်သင်တန်းများအနေဖြင့်အခမဲ့သင်တန်းနှင့်နေရာထိုင်ခင်း။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, အလုပ်အတွက်လျော့နည်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ ဒါပေမယ့်အဓိကရှုထောင့်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်ကလုံခြုံရေး နှင့်အငြိမ်းစားယူပြီးနောက်အဆောက်အဦ။ ထိုအခါအချို့သောအချိန်ပြီးနောက်ကောင်းသောပင်စင်သေချာသည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, ကအငြိမ်းစားယူသည်အထိ 25 နှစ်ဖြစ်ပါသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်မွန်ဘိုင်းမြို့အတွက်အစိုးရအလုပ်အကိုင်များအများစုကောင်းစွာပေးဆောင်နေကြတယ်, စကားပြော။ ပုဂ္ဂလိကအလုပ်အကိုင်များညီမျှထက်အများကြီးပိုပေးဆောင်အလုပ်အကိုင်နေရာလွတ်အများစုဟာ။ အမြင့်ဆုံးပေးချေအစိုးရကမ်းလှမ်းမှုလာပြီ, ဤအချက်များကိုပေးတော်မူ၏။ အတော်လေးခက်ခဲသော်လည်းမမဖြစ်နိုင်တဲ့အထူးသဖြင့်မွန်ဘိုင်းပုံရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်အများအပြားအစိုးရအလုပ်အကိုင်များထားရှိခဲ့ကြသည်။
ဓာတ်မြေသြဇာ, Ltd အဖြစ်အလုပ်အမှုဆောင်
အိန္ဒိယမီးရထားကို manual အလုပ်သမား
သို့သော်တစ်ဦးကောင်းစွာ-paid အလုပ်အထုပ်တစ်တိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ သာမန်သူတို့ရဲ့လက်ယူနှင့်လုပ်ခဝင်ငွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အိန္ဒိယမြင့်မားတဲ့ပညာတတ်လူတို့တွင်ကောင်းသောလူမှုရေးအဆင့်အတန်းကိုရရှိရန်, စကားပြော။ နယူးလူတစ်ဦးကိုအောင်မြင်စွာအများအပြားသင်တန်းများနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သူတို့ကိုအများကြီးသင်မြျှောလငျ့နိုငျထက်အများကြီးပိုခက်ဖြစ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်အစအဦးမှာအတှေ့အကွုံ lacs အတူ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဝင်ပေါက်စာမေးပွဲယူသစ်ကိုအလုပျသမားဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပါစေ။ မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့အောင်မြင်သောအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်စေရန်။ တစ်ဦးကလူတစ်ဦးမဖြစ်မနေ နေရာလွတ်ဤအမျိုးအစားများအတွက်ပြင်ဆင်မှုစတင်ပါ နှစ်အနည်းငယ်အစောပိုင်း။
မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့ No.6 HR အလုပ်ရှာဖွေရေး
လူသားတစ်ဦးအရင်းအမြစ်အထူးကုအဖြစ်။ တစ်ဦးချင်းစီကုမ္ပဏီ, သင်ရှေ့ဆက်သွားကြဖို့နေရာတစ်ပဒေသာရပါလိမ့်မယ်။ ထိုမှတပါး, ဒီအခန်းအလွတ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာလူ့မှလူသားတစ်ဦးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ စိတ်ထဲ၌ဤတစ်စမတ်စိတ်ကူးတူသောချုပ်ရိုးရင်ဆိုင်ဖို့မျက်နှာပြောနေတာအတူ။ သင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းလူတစ်ဦး၏တန်ဖိုးများကိုပတ်ဝိုင်းနိုင်ပါတယ်လို့ပဲ။ အဖြစ်သေချာရူပါရုံစံနမူနာများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြသည်အောင်။ အထူးသဖြင့် ကုမ္ပဏီအတွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအနေအထားများအတွက်။ အလုပ်အကိုင်စာတစ်စောင်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်မပြုမီ။ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနာဂတ်မှာဝန်ထမ်း၏ပြုပြင်ဘာသာစကားစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ အချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်မှုကိုလိုက်နာရမယ်လို့ပဲ။
အပြုသဘောဘက်တွင်အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်စနစ်များနှင့်အလေ့အထများရှိခြင်း။ နှင့်ဤအတူစိတ်တွင်, တူညီတဲ့စိတ်ကူးဝေမျှသူတွေကို၏အုပ်စုတစုအတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဓိကအရာတစျခုမှာဒီအနေအထားတွင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်။ ကျိန်းသေဖို့ဖြစ်ပါတယ် ကောင်းသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ထမ်းဖွံ့ဖြိုး။ မည်သည့်အချက်မှာအသစ်မန်နေဂျာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်မြေတပြင်လုံးကုမ္ပဏီ၏ယဉ်ကျေးမှုစီမံခန့်ခွဲ။ မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့ HR အမှုဆောင်အရာရှိအသစ်အငှါး လုပ်. ရသမျှသစ်ကိုအင်ဒီးယန်းစုဆောင်း။ အဖြစ်အချို့ကိစ္စများတွင်အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့လုပ်ခလစာကိုထိန်းသိမ်းရန်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပဋိပက္ခအတွင်းဖျန်ဖြေခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ။ အိန္ဒိယတွင်အထူးသဖြင့်စီမံခန့်ခွဲရန်လွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ဖြစ်လာသည်။ ဒါပေမဲ့ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အခန်းကဏ္ဍကုမ္ပဏီရဲ့အောင်မြင်မှု၏အဓိကမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်မျှမတို့ကိစ္စကဖြစ်ပျက်ဂုဏ်နလတံ့သောအရာကို။ ကုမ္ပဏီအတွက်လူသစ်ငှားရမ်းများအတွက်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်။ ကျိန်းသေသည်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့သက်ရောက်မှုရှိ ကုမ္ပဏီအနာဂတ်ရူပါရုံကိုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး.
အဓိကကဘာတွေလဲ ၏တာဝန်ဝတ္တရား လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အထူးကု?
အထူးကုသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးရှိခြင်းလူ့အရင်းအမြစ်များကို / HR လူတစ်ဦး /။ နှင့်သင်တန်း၏, အရှိဆုံးတာဝန်ရှိတာဝန်များကိုစုဆောင်းနှင့်တိုက်ရိုက် CV ကိုစိစစ်နေပါတယ်။ အမြဲတမ်းသေချာနောက်ခံစစ်ဆေးမှုများပြုထားပြီးကြောင်းအောင်။ ထိုအခါ အလားအလာရှိသောလုပ်သားများတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းနှင့်အားမရ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကုမ္ပဏီမန်နေဂျာများငှားရမ်းလျှင်။ အစဉ်အမြဲအပိုတုံ့ပြန်ချက်ပေးခြင်း The HR အလုပ်အမှုဆောင်။ ထို့ပြင်အမြဲတမ်းသေချာအနာဂတ်မှာမန်နေဂျာအောင်သင်တန်းကိုလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။ HR အထူးကုတာဝန်ရှိ / သူတစ်ဦး။ ကျိန်းသေ, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ခုတည်းသောဧရိယာပေါ်အာရုံစူးစိုက်လေ့ရှိပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်, စုဆောင်းရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောပါကကိုင်တွယ်ရန်သာနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောမွန်ဘိုင်းအဖြစ်ကြီးမားတဲ့မြို့၌တည်၏။ ဒေသများ၏အရေအတွက်ရှိလိမ့်မည်နှင့် အမျှအမြန်ဆုံးအဖြစ်ပြုရမည်ဟုတာဝန်များကို။ မွန်ဘိုင်းမြို့အတွက်သေးငယ်သည့်ကုမ္ပဏီများ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုရပါလိမ့်မယ် HR မန်နေဂျာသို့မဟုတ်န်ထမ်း။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အပိုကြီးသည့်ကုမ္ပဏီများအများအပြား HR အမှုဆောင်အရာရှိရှိခြင်း။ ထိုသို့အထူးသဖြင့်ဒေသများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူအမှုကိုပြုရရန်ကြိုးစားနေ။ ဒါကြောင့်အဖြစ်မှန်အတွက်သင်မှတက်ဖြစ် သငျသညျတခုအဖှဲ့အစညျး၏စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုသြဒိနိတ်ချင်ပါတယ်လျှင်။ အကြီးတန်းအမှုဆောင်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ သို့မဟုတ်အချို့အကူအညီဖြင့်ကြီးမားသောကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲခြင်း။
အိုင်တီကဏ္ဍမွန်ဘိုင်း No.7 အလုပ်အကိုင်
အဆိုပါ မွန်ဘိုင်းရှိအိုင်တီအလုပ်များ။ ထို့ကြောင့် IT Support နေရာများမှစတင်ကြပါစို့။ ကတည်းက သငျသညျအိန်ဒိယတှငျအလုပ်အကိုင်ဒီလိုမျိုးစတင်။ သငျသညျကြီးမားတဲ့ကော်ပိုရိတ်စက်အတွက်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဖွဲ့စည်းပုံ၏တစိတ်တဒေသဖြစ်လိမ့်မယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အိန္ဒိယအတွက်ကြီးမားတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, အိန္ဒိယအခြေစိုက်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများသည်။ လစဉ်လတိုင်း, နေ့နှင့်ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုအိုင်တီကျွမ်းကျင်သူရှာကြ၏။ ဒါကြောင့်, သငျသညျနည်းပညာပံ့ပိုးမှုနေရာလွတ်အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြလျှင်။ မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့အိုင်တီအလုပ်အကိုင်အခွင့်အအတွင်းအလုပ်အကိုင်အသင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်သင့်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ခြေတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ တစ်ဦးအလုပ်သစ်တစ်ဦးထက်ပိုလတ်ဆတ်အဖြစ်စတင်ခြင်း သို့မဟုတ်တစ် helpdesk အော်ပရေတာအဖြစ်။ အလွန်ကိုစတင်မှာသင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်လစ်လပ်သောနေရာဖြစ်သင့်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျအလုံအလောက်အတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်းလျှင်။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောကဏ္ဍများအတွက်စတင်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ, ကွန်ပျူတာစနစ်များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း။ ဥပမာတစ်ခုမှာအဖြစ်ကောင်းစွာကွန်ယက်နှင့်ဆာဗာများကိုအဖြစ် Linux ကို system ကိုဖြစ်ကြသည်။ ထို့ပြင်ကွန်ရက်များဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်သေချာအောင်။ အထူးသဖြင့်အဖွဲ့အစည်းတွင်ရုံးခန်းအတွင်း။
အဆိုပါအလုပ်အများဆုံးကဏ္ဍများ Front-line ကိုဖြစ်ကြသည်။ အခါတိုင်းအိုင်တီအင်ဂျင်နီယာအသစ်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်များတည်ရှိနှင့်တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ နှင့်အဖြစ်မှန်အတွက်သူတို့ကိုအများကြီး, ပြဿနာနှင့် ပတ်သက်. အလုံအလောက်ဗဟုသုတအသိပညာများရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ နှင့်ကျိန်းသေ, သူတို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များရပါလိမ့်မယ်။ ဘုံအမှားတွေအများစုဟာစကားဝှက်ဖိုင်တွေကိုအပ်လုဒ်တင်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကိစ္စရပ်များကိုမေ့လျော့နေကြသည်။ ဒါဟာမဖြစ်စေခြင်းငှါ အကောင်းဆုံးကို-paid အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ အထူးသဖြင့်အစအဦးမှာပါ။ သို့သော်ရေရှည်အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း။ မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့သငျ့လျြောသောအိုင်တီမန်နေဂျာကောင်းသောပိုက်ဆံဖြစ်စေမည်။
ဤအပိုင်းကိုများတွင်အလုပ်ရှာဖွေသူများကျိန်းသေစိတ်ဝင်စားဖို့သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာပါ။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အကောင်းဆုံးကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက်ဘ်ဆိုက်များ။ အဘယ်မှာရှိအလုပ်ရှာဖွေသူများအလားအလာအလုပ်ရှင်များကိုရှာပါ။ အဆင့်မြှင့်သတင်းအချက်အလက်အဘို့မိမိတို့အသေးစိတ်ကို Register ။ ထိုအခါနောက်ခံ, အလုပ်ရှာဖွေသူများအလုပ်သတိပေးချက်အဘို့မိမိတို့ပရိုဖိုင်းမှတ်ပုံတင်ရန်သင့်တယ်။ ပူးပေါင်းဘို့တောင်မှအနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောအီးမေးလ်ကိုဖိတ်စာများကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမနေတဲ့အလားအလာအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရရှိနိုင်ဖြစ်လာသည့်အခါကိုသိလို့ပဲ။
မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့ No.1 NaukriGulf အလုပ်အကိုင်များ
အိန္ဒိယတွင် NaukriGulf ။ အိန္ဒိယအနေဖြင့်အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်များက်ဘ်ဆိုက်များတစ်ခုမှာ။ ယခုအချိန်တွင်ဒေသခံအလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှမှာ။ နှင့်အဖြစ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်တော်ပြန်။ သူတို့ကို join ဖို့ဆန္ဒရှိနေသောလူများအများစုမှာ။ သေချာဘို့မွန်ဘိုင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုတွေ့လိမ့်မည်။ ယခုအချိန်တွင်ယင်းကုမ္ပဏီအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောကဏ္ဍများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ ထို့အပြင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများစာရင်းမွန်ဘိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်။
မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက် No.2 Olx
အခြား အိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ပေါ်တယ်။ ဒါဟာ OLX အိန္ဒိယဖြစ်ပါသည်။ နှင့် Olx မွန်ဘိုင်း လည်းပဲ Olx ဒေလီ။ နှင့်အခြားသောလက်ပေါ်မှာပင် Olx Pune သင်တစ်ဦးအလုပ်ရရန်ကူညီသင့်တယ်. ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူသစ်ဧည့်သည်များအကြောင်းကြားရန်လိုသည်။ သောကြောင့်အဘယ်သူကိုမျှများအတွက်အခမဲ့ဒေသခံကျွောငွာ site ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အပို့စ်တင်ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးအိန္ဒိယကျော်ထိုသူအပေါင်းတို့နှင့်အတူပေးထားပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လူတွေဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကိုစတင်ပါ။ အလွယ်ကူဆုံးလမ်းအတွက်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်း။ သို့သော်နေ့စဉ်ကုမ္ပဏီအသစ်ကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှုရှိခြင်း။
No.3 QuikrJobs ယောဘကို Add
ဒါကြောင့်အိန္ဒိယအဘို့ဖြစ်၏ Quickr ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူလည်းအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ သူတို့ရဲ့ profile များကိုပို့စ်တင်နေပါသည်။ မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့အလုပ်အကိုင်ရတဲ့မျှော်လင့်။ telesales မှစ. , စျေးကွက်နှင့်အတူဧညျ့ကွိုနှင့်အိုင်တီ။ အလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုများအားလုံးသည်ရှိပါတယ်။ အသစ်အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုကွဲပြားခြားနားသောမြို့များမှဖြစ်ကြသည်။ လူအားလုံးတို့သည်အိန္ဒိယနှင့်ဆင်ခြေဖုံးကျော် MBA ဘွဲ့ရအရည်အချင်းများနှင့်အတူ.
အမှန်စင်စစ်တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်ကိုလည်းမွန်ဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းသည်။ ထိုအနေသည် အကောင်းဆုံးကိုအလုပ်ရှာဖွေများထဲမှ ကမ္ဘာကြီးကိုအပေါ်အင်ဂျင်။ ဒါကြောင့်သင်ကမွန်ဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာနေလျှင်။ ကျိန်းသေအောက်တွင်ကြည့်ရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အကတစ်ခုဖြစ်တယ် ပါကစ္စတန်များအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်အလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်လမ်းညွှန် နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံ။ ဒါကြောင့်အဖြစ်မှန်အတွက်မွန်ဘိုင်းကဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
No.5 WorkIndia အလုပ်ပေါ်တယ်
အိန္ဒိယတွင်အလုပ်, တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, အိန္ဒိယကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံး၏အကြားဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်ရှာဖွေသူများနိုင်ကြသည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှုကိုရှာဖွေ။ ထို့အပြင် foreground အတွက်အင်တာဗျူးအကြံပေးချက်များတွေအများကြီးရှိသေး၏။ စိတ်ဝင်စားအလုပ်အကိုင်များအမျိုးအစားတွေအများကြီးလည်းရှိပါသည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာအရပျ၌တည်နေရာ system အဖြစ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကတကယ်ရှိပါတယ် ရှေ့ဆက်သွားကြဖို့အလုပ်ရှာဖွေသူများအကြံပေး ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူ။ ထိုအ updated အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုမှကိုယ်ရေးရာဇဝင် post ။
No.6 Monster အလုပ်ဘုတ်အဖွဲ့
Monster အိန္ဒိယနာမည်ကျော်တယောက်တဦး။ ထိုအခါအသက်အကြီးဆုံးအလုပ်အကိုင်များဘုတ်အဖွဲ့။ ဤရွေ့ကား, အိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အလုပ်တစ်ခု site ကိုဖြစ်ပါတယ်။ Monster.com အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်စုဆောင်းမှုအရင်းအမြစ်ပေး။ ကျိန်းသေမန်နေဂျာငှားရမ်းခြင်းနှင့်ဒါရိုက်တာများငှားရမ်းဖို့သက်ဆိုင်ရာ profile များကိုပေးစွမ်းသည်။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့သက်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဥပမာအဖြစ်ဘန်ဂလိုနှင့်အတူဒေလီနှင့် ဒိုဟာ။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်ချင်နိုင်း, Pune နှင့်ကာလကတ္တားအတွက်ငှားရမ်းကြသည်။
Glassdoor နှင့်အတူ No.7 မွန်ဘိုင်းဂျော့ဘ်
Glassdoor အမှန်ပင်ထိပ် 10 ကုမ္ပဏီများမှကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သင်မွန်ဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောရယူခြင်း လက်ျာအလုပ်အကိုင် မွမ်ဘိုင်းတွင်။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုမဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ratings & လစာများအတွက်လမ်းညွှန်ပစ္စုပ္ပန်အချိန် Glassdoor ကုမ္ပဏီတစ်ခုကတက်၏ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသစ်အလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုထိုကဲ့သို့သောမွန်ဘိုင်းအဖြစ်မြို့ကြီးများနှင့်အတူဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ဒါကြောင့်လည်းသူတို့နှင့်အတူအငှါးရနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
Shine.com အတူ No.8 18k ဂျော့ကျော်ရှိပါတယ်
မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့ 18,000 တက်ကြွအလုပ်အကိုင်များကျော်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီနှင့်ဤအလုပ် site ကိုအတွင်းကိုတိုက်ရိုက်ရှာဖွေစုဆောင်း။ ကျိန်းသေရှိသည် အသစ်ကနေရာလွတ်တွေအများကြီး မွမ်ဘိုင်းတွင်။ ဒါကြောင့်သင်နောက်ဆုံးရအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ထို့အပွငျကဏ္ဍမျိုးစုံနှင့်သင်၏အသေးစိတျမှတျပုံတငျ။ မွန်ဘိုင်းကိုဖြတ်ပြီးများစွာကိုအလုပ်အကိုင်များနှင့်အတူကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကကုမ္ပဏီသင်သည်ပူဇော်နိုင်ပါတယ် ကောင်းသောထိပ်တန်းအများကြီးလေဆိပ်မှာအလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ် rated။ ထို့အပြင်ဤကုမ္ပဏီတစ်ခုကအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေနေသူအခမဲ့သတိပေးချက်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။
ပိုလတ်ဆတ်ကမ္ဘာ့ဖလားနှင့်အတူမွန်ဘိုင်း No.9 ဂျော့ဘ်
လည်းရှိပါတယ် ပိုလတ်ဆတ်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှု မွမ်ဘိုင်းတွင်။ နှင့်လောလောလတ်လတ်ဘွဲ့ရခဲ့ကြသူတွေကိုကျိန်းသေဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အစိတ်ဝင်စားရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူတစ်ဦးကြည့်ရှိသည်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ အဖြစ် frehsworld.com မှအပ်လုဒ်ကို CV ကို။ အများကြီးရှိပါတယ် ဒီအလုပ် site ကိုမှာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အသောနေရာများ.
Randstad နှင့်အတူမွန်ဘိုင်း No.10 ဂျော့ဘ်
Randstad ကုမ္ပဏီကျိန်းသေသင်တစ်ဦးရရှိရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည် မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့အလုပ်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလည်းရှိပါတယ်ကြောင့်ဤကုမ္ပဏီပေးထားပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သငျသညျအများအပြားအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအဘို့။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အင်ဂျင်နီယာနှင့်အတူရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးကြည့်ရှိသည်နှင့်တစ်ဦး updated ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးပို့ဖို့တကယ်ကျိုးနပ်သည်။
မွန်ဘိုင်းအိန္ဒိယမြို့တော်မြို့ဖြစ်၏။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒူဘိုင်းတစ်ဦး Arabic အဘိဓါန်ယဉ်ကျေးမှုအိုင်ကွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား, ဤမြို့နှစ်မြို့ကွယ်ပျောက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ထံမှအခွအေစေသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မွန်ဘိုင်းအနည်းငယ်ကောင်းသောနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများသည်ရှိခြင်း။ ဥပမာအားဖြင့်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများအများကြီးမွန်ဘိုင်းစီးတီး၌မိမိတို့ရုံးခန်းများတင်လိုက်တယ်။ သို့သော်ဒူဘိုင်းအတွက်, ကြီးမားတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ် Arabic အဘိဓါန်ကော်ပိုရေးရှင်းသည်။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့့အပေါ်အခြေခံပြီးလျှင်။ ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ရှိပါသည်။ အဲဒီနှစျခုမြို့ကြီးများအပေါ်အခြေခံပါတယ်။ အဘို့ ဥပမာအားဒူဘိုင်းစီးတီး။ ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့ပိုပြီး Oriental ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်အသစ်သောဧည့်သည်များ။ ဒါကြောင့်အိန္ဒိယကနေလူမျိုးဖြစ်ကြ၏ ယူအေအီးမှရွှေ့ဖို့ရှာဖွေနေ။ အပြုသဘောဘက်မှာသူတို့ကိုအများကြီးထားလိမ့်မည်။ သို့သော်အချို့မှာမူမွန်ဘိုင်းသို့ပြန်သွားကြသည်။ ကုန်ကျစရိတ် ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင် ကျနော်တို့မွန်ဘိုင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားသည်။ ထို့အပြင်နေရာထိုင်ခင်းနှင့်အခြေချ၏ကုန်ကျစရိတ်။ ယူအေအီးအတွက်အတော်လေးမြင့်မားသောဖြစ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်အသစ်တခုအသက်တာ၏အစအဦးမှာ.
မွန်ဘိုင်းထိပ်တန်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ကြီးထွားလာနာမည်ကျော်မြို့ဖြစ်၏။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဤအရပ်ဌာနကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအဆင့်အထိဝင်ငွေလူဦးရေရှိတယ်။ အဖြစ်မွန်ဘိုင်းအတွက်, တက်ကြွယဉ်ကျေးမှုသောနေရာများရှိပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အတိတ် 20 နှစ်တွေ။ မွန်ဘိုင်းမြို့ကအဓိကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးစင်တာသို့အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ နှင့်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများကအများကြီးရှိပါတယ်ရွေ့လျားနေကြသည်။ ကွောငျ့ ဤအရပ်ဌာနကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ထိပ်ဆုံးနေကြတယ်။ နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများနှင့်စီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းများကသီနှင့်အတူနိုင်ငံတကာသို့ခြိုးဖောကျ စီးပွားရေးလောကနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူတိုးပွားလာလူကြိုက်များမှဦးဆောင်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရနိုင် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။